Dowlada KMG oo cambaareeysay dilkii Yuusuf Fareey
Updated About:286 days ago 0
Warsaxaafadeed kasoo baxay wasaarada warfaafinta ayaa lagu cambaareeyey dilki maanta loo geystay wariye Yuusuf Fareey.
(Muqdisho, August 12,2012) Dowladda waxay si xoog leh u cambareyneysaa dilka qorsheysan ee loogeystay agaasimihii Wasaaradda Warfaafinta u qaabilsanaa xiriirka saxaafadda,marxuum Yuusuf Cali Cismaan, oo maanta gelinkii hore lagu dilay xaafadaDharkeynley ee gobolka Banaadir, kadib markii ay soo weerareen rag bastooladdoku hubeysan.
Wasiirka WasaaraddaWarfaafinta, Boostada iyo Isgaarsiinta, Mudane Cabdulqaadir Xuseen Maxamed ayaau sheegay Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed in uu ka xun yahay dilkii loogeystay agaasimaha, “Waxaan si gaar ah uga xun nahay dilkii saaxiibkeen, YuusufCali Cismaan, oo ahaa agaasime howlkar ah oo wax badan ka qabtay WasaaraddaWarfaafinta” ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka oo intaas kudaray ayaa yiri, “Waxaan cambaareyneynaa dilka waxshinimada ah ee loo geystaymuwaadin usoo taagnaa horumarinta dalkiisa iyo dadkiisa muddo ka badan 30sano.” Dowladda waxay tacsi u direysaa qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyoodaymarxuumka, asagana waxaa Ilaah looga baryayaa in naxariistii janno kawaraabiyo.
Marxuumka Yuusuf waa kiiugu danbeeyay ee lala beegsado dil qorsheysan, taas oo dhawaanahan lagu hayayshaqsiyaad waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed, sida shaqaalaha dowladda,saxaafadda iyo bulshada rayidka. Dowladda waxaa ka go’an in dabagal lagusameeyo kooxaha caasimada ka fuliya dilalka qorsheysan ee argagixisada ah.
Axmed Madoobe oo soo dhaweeyay War-murtiyedka IGAD balse kasoo horjeestay shirka Muqdisho